आर्थिक पाटोबाट मैले यो कार्यक्रमलाई हेरेको नै छैन आर्थिक लाभ भयो भने सर्जकको रोयल्टी मार्दिन— चेतन सापकोटा - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
संगीतकार चेतन सापकोटा जनवरी १३ तारिख अर्थात आज सनिवार जापानमा एकल साँझमा गुञ्जदै छन । जापानको टोकियोमा ‘चेतन सापकोटा एकल साँझ’को आयोजना गरिएको हो । प्रवासी नेपाली मञ्च जापान र नेपाली प्रगतिशिल मञ्च जापानको आयोजनामा कार्यक्रम हुन लागेको हो । यहि सेरोफेरोमा सापकोटा संग लोकराज अधिकारीले गरेको आजको गफ ।
पहिलो एकल साँझ हैन त यो?
सम्भवत नेपाली संगीतकारको विदेशमा पहिलो एकल साँझ हो ।
संगीकार चेतन सापकोटाको जापानमा एकल साँझ हुने पहिले नै तय भएको हो कि आकस्मिक रुपमा भएको हो?
प्रवासी नेपाली मञ्च जापान र नेपाली प्रगतिशिल मञ्च जापानले हामी तपाईलाई केही सरप्राईज गराउँछौ भन्नुभएको थियो । त्योपछि म आए र तपाईले यो नयाँ वर्षको वरिपरीमा कुनै प्रोग्राममा बोलाउछु आउँनुहोला भन्नुभयो । मैले हैन प्रोग्राम फिक्स त गर्नु भनेर भने । उहाँले त्यो पछि तपाईको तीन चार वटा प्रोग्राम रहेछ । जुन प्रोग्राममा आउँदै हुनुहुन्छ आउनुस । त्यो भ्याउनुस त्यसपछि एउटा सरप्राईज प्लान चाहि टोकियोले दिन्छ भन्नुभयो । त्यो पछि प्रोग्राम सकेर मैले टोकियोमा ईन्ट्रि गरेर मलाई टोकियो घुम्न बोलाएको साथीहरुकोमा गए । त्यो पछि म सिधै नागोयामा मेरो प्रोग्राममा गए । त्यहाँ नेपाल आईडलको भाई सागर आले संग मेरो पहिलो प्रस्तुती थियो । त्यो नेपाल जापान समाजको कार्यक्रम थियो ।
त्यहाँ प्रोग्राम राम्रो भयो । त्योपछि अर्को पनि प्रोग्राम त्यही गर्न गए । त्यहाँ बस्दा बस्दै मलाई त्यहाँ अर्का प्रोग्रामको अफर आयो । म खासमा त्यही प्रोग्रामको लागि आएको थिए । तर सरप्राईज प्रोग्राम भनेर मलाई प्रोग्रामको अफर आयो । त्यहाँ उहाँहरुले मलाई पोस्टर देखाउनुभयो । चेतन सापकोटा एकल साझँको । उहाँले मलाई आफ्नो गीतहरु गाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँलाई मैले हाम्रो अग्रजहरु र मेरो गीत गाएर मैले एक घण्टाको कार्यक्रम गर्न सक्छु भने । उहाँले मलाई तपाईको प्रोग्राम डेढ घण्टाको गर्ने भनेर फाईनल गर्नुभयो ।
एकल साँझको तयारी कस्तो छ ?
नेपालमा संगीतकार शम्भुजित बास्कोटासंग सम्पर्कको प्रयास गरेको छु । शम्भुजित दाई संग सम्पर्क भएको छैन । उहाँलाई भाईबरमा कोषिश गरिरहेको छु । म के भन्न चाहन्छु भने संगीतकार सघंको सचिव पनि हुँ म । संगीतकार सघंले पनि थोरै ध्यान देओस भन्ने चाहन्छु । किनकी म संघको नै एउटा सचिव भएको कारणले म आफै पहल गरेर एकल साँझ गर्दै छु । यी सबै कुरा संगीतकार सघंले नै गर्नुपर्ने हो । संघंले सबैको एकल साँझ राख्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । मैले अहिले जापानमा कार्यक्रम गरिरहेको छु । संगीतकार सघंले थोरै ईनिसियसन लिओस भन्ने म चाहान्छु । म मेरो समकालिन संगीतकारको पनि गीत गाउन चाहान्छु । त्यो कारण मैले सघंका अध्यक्ष लक्ष्मण शेष जीलाई पनि सम्पर्क गर्न खोजको छु । उहाँलाई म्यासेन्जरमा म्यासेज छोडेको छु ।
लाईभ बाजा र अभ्यास के छ ?
यो सबै ट्रयाकमा नै हुन्छ । जति पनि ट्रयाकहरु पाउँछु मैले त्यसमा नै गाउने छु । लाईभको लागि गाह्रो छ ।
एउटा संगीतकार विदेशमा एकल साझँ गर्दै हुनुहुन्छ सगै तपाई रोयल्टीको पनि पूर्व बोर्ड सदस्य पनि हुनुहुन्छ । तपाईको एकल साझँबाट रोयल्टी संकलन र हस्तान्तरण हुन्छ कि नाई ?
यो आकस्मिक भएको कार्यक्रम भएर यसबाट प्रोफिट निकाल्छु भनेर सोंचेको छैन । यो कार्यक्रम मलाई उहाँहरुले सरप्राईज गिफ्ट भनेर दिनुभयो । संगीतकार पनि एउटा पर्फमर हो भनेर मैले यो कार्यक्रममा काम गर्न लागेको हो । आर्थिक पाटोबाट मैले यो कार्यक्रमलाई हेरेको नै छैन । मैले यो कार्यक्रम संगीतकार र संगीतकर्मीको पहिचानका लागि भनेर अगाडी बढेको छु । संगीतकारको कति गीतहरु गायकहरुले गाएको रेर्कड छ तर त्यसको रोयल्टी अहिले सम्म आएको छैन । आर्थिक लाभ भयो भने म सर्जकको रोयल्टी मार्दिन ।
एकल साँझ नेपाली समय अनुसार कहाँ र कुन बेला शुरु हुन्छ?
यो एकल साँझ यहाँको समय छ बजे भनेपछि नेपाली समय लगभग तिन बजे हुनुपर्छ । टिकटको मूल्य जापानी ऐन तीन हजार राखिएको छ ।